वैलियम बनाम अटिभन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | अगस्ट 2021
कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय, कम्पनी चेकआउट समुदाय समाचार, कल्याण घरपालुवा जनावर स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण प्रेस समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा कम्पनी, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर कम्पनी
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> वैलियम बनाम अटिभन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
वैलियम बनाम अटिभन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
Valium र Ativan प्रिस्क्रिप्शन औषधी हो जुन अन्य मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाको बीचमा चिन्ताको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुबै भोलियम र एटिभन बन्जोडियाजेपाइन (कहिलेकाँही बेंजोस पनि भनिन्छ) भनेर चिनिने औषधीहरूको वर्गको एक हिस्सा हुन्। तिनीहरू मस्तिष्कमा GABA (गामा-एमिनोब्यूट्रिक एसिड) को गतिविधि बढाउँदै काम गर्दछन्। GABA एक निषेध न्यूरोट्रान्समिटर हो जसले अत्यधिक न्यूरोनल गतिविधि कम गर्न मद्दत गर्दछ।
Valium र Ativan मात्र एक मान्य डाक्टरको पर्ची संग प्राप्त गर्न सकिन्छ। किनभने दुबै औषधिहरू दुरुपयोग र निर्भरताका लागि सम्भावित हुन सक्छ, तिनीहरूलाई उचित चिकित्सा सल्लाहको साथ लिनुपर्दछ।
भेलियम बनाम अटिभन बीचको मुख्य भिन्नता के हो?
Valium लाई यसको जेनेरिक नाम diazepam द्वारा चिनिन्छ। वयस्क र months महिना र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूमा चिन्ता, मांसपेशी ऐंठन, र दौराका लक्षणहरूको उपचार गर्न यसको प्रयोग गरिन्छ। Valium लाई लामो-अभिनय गरिएको बेंजोडाइजेपाइन मानिन्छ किनकि यो शरीरबाट बिस्तारै हटाइन्छ। यसले Valium लाई शरीरबाट खाली हुन धेरै दिन लिन सक्दछ।
अटिभन - जेनेरिक नाम लोराजेपम anxiety लाई चिन्ताका लक्षणहरूको उपचारको लागि संकेत गरिएको छ यद्यपि यो १२ वर्ष वा सो भन्दा बढि वयस्क र बच्चाहरूमा अनिद्रा र निश्चित दौराको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। अन्यको तुलनामा बेन्जोडियाजेपाइन , अटिभन एक मध्यवर्ती अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन मानिन्छ लगभग १ 18 घण्टाको आधा जीवनको साथ।
Valium र Ativan बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग बेन्जोडियाजेपाइन बेन्जोडियाजेपाइन
ब्रान्ड / जेनेरिक स्थिति ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध ब्रान्ड र जेनेरिक उपलब्ध
जेनेरिक नाम के हो? Diazepam लोराजेपाम
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? मौखिक ट्याब्लेट
इंजेक्शन (सामान्य) मौखिक ट्याब्लेट
मानक खुराक के हो? २ देखि १० मिलीग्राम, दुई देखि चार पटक दैनिक २ देखि mg मिलीग्राम प्रति दिन दुई वा तीन खुराकमा विभाजित
विशिष्ट उपचार कति लामो हुन्छ? छोटो अवधि को उपयोग, months महिना भन्दा लामो छैन छोटो अवधि को उपयोग, months महिना भन्दा लामो छैन
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र months महिना भन्दा माथिका बच्चाहरू वयस्क र १२ बर्ष भन्दा माथिका बच्चाहरू
Valium मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
Valium मूल्य सतर्कताहरूको लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
भेलियम बनाम अटिभन द्वारा उपचार गरिएको अवस्था
Valium उपचार गर्न अनुमोदित छ चिन्ता विकार , दौरा र मांसपेसी ऐंठन जब्ती विकारहरूको उपचारका लागि अन्य उपचारहरूसँग संयोजनमा Valium प्रयोग गर्न सिफारिस गरिन्छ। भोलियमले रक्सी निकाल्ने लक्षणहरू जस्तै आन्दोलन, कंपकुल, प्रलाप, र भ्रमको उपचार गर्न पनि अनुमोदन गरिएको छ। केही व्यक्तिलाई शल्यक्रिया अघि वालियम अफ-लेबललाई एनिसियोलिटिक वा शामकको रूपमा पनि सिफारिस गर्न सकिन्छ।
अटिभन चिन्ता डिसअर्डर, अनिद्रा र दौर्नेहरूका लागि अनुमोदित छ। यद्यपि यसका अन्य प्रयोगहरू पनि छन् जस्तै मांसपेशियोंको ऐंठनको अफ-लेबल उपचार र रक्सी फिर्ता लक्षणहरू। अटिभन केही शल्यक्रिया अघि बेहोसनका साथ सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
तपाईले अनुभव गरिरहनु भएको लक्षणका आधारमा भेलियम वा अटिभन निर्धारित गर्न सकिन्छ। यी औषधि मध्ये कुनै एकको लागि पर्ची प्राप्त गर्न स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको मूल्या An्कन आवश्यक हुन्छ। बहुम केसहरूमा दीर्घकालीन प्रयोगको लागि वैलियम र अटिभन सिफारिस गरिदैन।
सर्त Valium अटिभन
चिन्ता विकार हो हो
रक्सी निकासी सिन्ड्रोम हो अफ-लेबल
स्केलेटल मांसपेशी ऐंठन हो अफ-लेबल
दौरा हो हो
अनिद्रा अफ-लेबल हो
Sedation अफ-लेबल अफ-लेबल
के Valium वा Ativan अधिक प्रभावी छ?
भेलियम वा अटिभन उपचार गरिँदै गरेकोमा अझ बढी प्रभावकारी हुन सक्छ। किनकि सबैले ड्रगहरू फरक तरीकाले प्रक्रिया गर्न सक्दछन्, प्रभावकारिता व्यक्तिगत कारकहरूमा आधारित हुन सक्दछ जस्तै अन्य सर्तहरू वा अन्य औषधी लिईएकोमा (ड्रग अन्तर्क्रिया तल हेर्नुहोस्)।
Valium र Ativan देखाइएको छ समान प्रभावकारी बेन्जोडियाजेपाइनको रूपमा। बच्चाहरूमा, दुबै बेंजोडाइजेपाइनहरू बच्चाहरूमा स्थिति इपिलेटिकस, गम्भीर प्रकारको दौराको उपचारको लागि प्रभावकारी छ। अर्को परीक्षण दुबै ड्रग्स पनि रक्सी रकम सिन्ड्रोमको लागि समान रूपमा प्रभावकारी छन् भनेर पत्ता लगायो। एक अनियमित मा, प्रयोगसाला परिक्षण , diazepam र lorazepam सँग तुलनाको सुरक्षा र प्रभावकारिता थियो।
भोलियम र अटिभन मुख्यतया तिनीहरूको कार्य अवधिमा भिन्न हुन्छ किनकि शरीरबाट खाली हुन लामो समय लिन्छ। यसले उपचारका अन्य कारकहरूलाई असर गर्न सक्छ जस्तै सम्भावित साइड इफेक्टहरू।
उत्तम उपचार विकल्प खोज्नका लागि डाक्टर वा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकबाट उचित मूल्या necessary्कन आवश्यक छ। उपचार लक्षण र गहनताको आधारमा बनाउनेछ।
melatonin को सामान्य खुराक के हो?
Ativan मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
एटिभन मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
वैलियम बनाम अटिभनको कभरेज र लागत तुलना
एक पर्चेको साथ Valium खरीद एक सीधा प्रक्रिया हो। यो अक्सर चिकित्सा र बीमा योजनाहरु द्वारा कभर गरिएको छ। यद्यपि, प्राय जसो बीमा योजनाहरूले मात्र जेनेरिक वैलियमलाई समाहित गर्दछ। Diazepam को लागी औसत खुद्रा मूल्य $ 60 को आसपास छ। एकलकेयर डिस्काउंट कार्ड प्रयोग गर्नाले around १२- $ around$ को आसपास मूल्य घटाउने फाइदा छ।
अटिभन एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग हो जुन प्राय: बीमा योजनाहरूको साथ प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुन फार्मेसीबाट तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ, आटिभनको $ 800 भन्दा बढी खर्च हुन सक्दछ। साधारण C २० को लागी जेनेरिक औषधि लिन एकलकेयर लोराजेपाम कुपन प्रयोग गर्नुहोस्।
मानक खुराक २ मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू ०. mg मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू
विशिष्ट मेडिकेयर कोपे $ ०- $ १२ $ ०- $ २।
एकलकेयर लागत $ १२- $।। $ २०
वैलियम बनाम अटिभनको साझा साइड इफेक्टहरू
अटिभनको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टमा सीएनएस (केन्द्रीय स्नायु प्रणाली) प्रभावहरू जस्तै बेहोराउने, चक्कर आउने, र स्थिरता समावेश गर्दछ। अन्य साइड इफेक्टमा कमजोरी, भ्रम, र मतली समावेश हुन सक्छ।
Valium को साइड इफेक्टमा तन्द्रा, थकान, मांसपेशि कमजोरी, र समन्वयको समस्या (अटाक्सिया) समावेश छ। केही व्यक्तिहरूले रिपोर्ट गरेको अन्य साइड इफेक्टहरूमा मतली, चक्कर, र भ्रम समावेश छ।
भेलियम र अटिभनको अधिक गम्भीर साइड इफेक्टहरूमा श्वासप्रणालीको उदासीनता (ढिलो सास फेर्ने) समावेश हुन सक्छ, विशेष गरी जब अधिक मात्रामा लिन्छ। अन्य प्रतिकूल प्रभावहरूमा मेमोरी समस्याहरू (अम्नेसिया), कम रक्तचाप, धमिलो दर्शन, विरोधाभासपूर्ण आन्दोलन, चिढचिढापन, र निद्रा गडबडी समावेश हुन सक्छ।
Sedation हो * रिपोर्ट गरिएको छैन हो १.9..9%
मांसपेशी कमजोरी हो * हो 2.२%
तन्द्रा हो * हो *
थकान हो * हो *
अटाक्सिया हो * हो *
चक्कर हो * हो 9.9%
अस्थिरता हो * हो 4.4%
मतली हो * हो *
भ्रम हो * हो *
यो पूर्ण सूची नहुन सक्छ। अन्य साइड इफेक्टहरूको लागि तपाइँको डाक्टर वा फार्मासिष्टबाट परामर्श लिनुहोस्।
स्रोत: डेलीमेड ( Valium ), डेलीमेड ( अटिभन )
वैलियम बनाम अटिभनको ड्रग अन्तर्क्रिया
अटिभनसँग वैलियमको तुलनामा थोरै ड्रग अन्तरक्रिया हुन सक्छ। यसको कारण यो कलेजोमा ग्लुकोरोनिडेसन भनिने प्रक्रियाद्वारा मेटाबोलिज हुन्छ। अर्कोतर्फ, Valium CYP कलेजो इन्जाइमहरू द्वारा धेरै प्रशोधन गरिन्छ। केटोकोनाजोल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, वा यस्तै प्रकारका ड्रग्सले CYP कलेजो एन्जाइम प्रक्रियालाई असर गर्न सक्छ र प्रभावकारिता बदल्न वा यी औषधिहरूको साइड इफेक्ट बढाउन सक्छ।
बेन्जोडाइजेपाइनहरू जस्तै वैलियम वा एटिभनले अन्य औषधिहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् जसमा सीएनएस साइड इफेक्टहरू हुन्छन् जस्तै एन्टिसाइकोटिक्स, एन्टिकोनभल्सेन्ट्स, बार्बिटुरेट्स, एन्टिडिप्रेससन्ट, र शामक। यी ड्रग्सको साथ बेन्जोडियाजेपाइनहरू लिदा प्रतिकूल साइड इफेक्टहरू जोखिम बढाउन सक्दछ जस्तै निन्द्रा, बेहोरा, भ्रम, र बिग्रेको समन्वय।
प्रोबिनेसिड लिदा भेलियम वा एटिभनको मेटाबोलिज्म कम गर्न सक्दछ जब सँगै लिइन्छ। यसले बेंजोडाइजेपाइनको लामो प्रभावलाई निम्त्याउँदछ र फिर्ती वा प्रतिकूल साइड इफेक्टको जोखिम बढाउन सक्छ।
थियोफिलिन र एमिनोफिलिनले भोलियम वा अटिभन जस्ता बेंजोडाइजेपाइनहरूको शामक प्रभावहरूलाई कम गर्न सक्छ। यी औषधिहरू प्रभावकारितामा परिवर्तनहरू रोक्नको लागि डाक्टरसँग छलफल गर्नुपर्दछ।
औषधि ड्रग क्लास Valium अटिभन
ट्रामाडोल ओपियोइड्स हो हो
Lamotrigine एन्टिकोनभल्सेन्ट्स हो हो
सेकोबारबिटल बार्बिटुरेट्स हो हो
Risperidone एन्टिसाइकोटिक्स हो हो
Nortriptyline Tricyclic antidepressants हो हो
Tranylcypromine मोनोमाइन अक्सिडेज अवरोधक (MAOI) हो हो
प्रोबेनेसिड Uricosuric हो हो
एमिनोफिलिन मेथिलक्साँथाइन हो हो
रिफाम्पिन एन्टिबायोटिक हो हैन
Itraconazole एन्टिफंगल एजेन्ट हो हैन
यो सम्भावित सबै औषधी अन्तरक्रियाहरूको पूर्ण सूची नहुन सक्छ। तपाईले लिने सबै औषधिहरूको साथ डाक्टरलाई परामर्श लिनुहोस्।
भेलियम बनाम अटिभनको चेतावनी
ओपियोइड्स लिँदा अन्य बेंजोडाइजेपाइनहरू जस्तै भोलियम र अटिभन पनि त्याग्नु पर्छ। बेन्जोडियाजेपाइन र ओपियोइड एकसाथ लिनाले श्वासप्रश्वासको उदासीनता, कोमा र मृत्युको जोखिम बढाउन सक्छ। बेन्जोडियाजेपाइन र ओपियोडिससँग त्यस्तै प्रतिकूल सीएनएस प्रभावहरू छन् जस्तै निन्द्रा जुन उनीहरूलाई सँगै लैजाँदा मिश्रित बनाउन सकिन्छ।
बेन्जोडियाजेपाइनले फिर्ता लिने खतरा बढाएको छ जब थेरी अचानक रोकिन्छ। फिर्ता लक्षणहरूमा टाउको दुख्ने, अनिद्रा, र बढि चिन्ता समावेश हुन सक्छ। वापसीको जोखिम कम गर्न यी ड्रग्सलाई बिस्तारै टेप गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
दुबै Valium र Ativan लाई अनुसूची IV नियन्त्रित पदार्थहरूको रूपमा DEA लेबल गरिएको छ। अर्को शब्दमा, तिनीहरूसँग दुर्व्यवहार र निर्भरताका लागि केहि सम्भावना छ। त्यसकारण, तिनीहरूलाई सामान्यतया दीर्घकालीन उपयोगको लागि सिफारिश गरिदैन।
गर्भावस्थामा Valium र Ativan सिफारिश गरिदैन। बेंजोडाइजेपाइन लिनु जन्म दोषसँग सम्बन्धित छ। दुबै औषधिहरू गर्भावस्था कोटि D मा छन्, जसको मतलब यो हो कि अध्ययनहरूले उनीहरूको प्रयोगले भ्रुण जोखिम देखाएको छ।
भेलियम बनाम अटिभनको बारेमा बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू
भेलियम भनेको के हो?
वैलियम एक पर्चेको औषधि हो जुन चिन्ता विकार, मदिरा फिर्ता र मांसपेशिको ऐंठनको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ। यो एक लामो-अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन हो जसले वयस्क र children महिना र सो भन्दा बढि उमेरका बच्चाहरूलाई उपचार गर्न सक्दछ।
एटिभन भनेको के हो?
अटिभन एक पर्चेको औषधि हो जुन चिन्ता विकार, बरामदगी, र अनिद्राको लागि अनुमोदित हुन्छ। यो एक मध्यवर्ती अभिनय बेन्जोडियाजेपाइन हो जसले १२ बर्ष र माथिका वयस्क र बच्चाहरूको उपचार गर्न सक्दछ। अन्य मध्यवर्ती अभिनय बेन्जोडियाजेपाइनहरूले समावेश गर्दछ Xanax (alprazolam) र Klonopin (clonazepam)।
के Valium र Ativan समान छन्?
होइन। Valium एक लामो-अभिनय औषधी हो जुन शरीरबाट खाली हुन केही दिन लिन सक्दछ। तिनीहरूसँग विभिन्न उमेर प्रतिबन्धहरू, साइड इफेक्टहरू, र अनुमोदित प्रयोगहरू पनि छन्।
के Valium वा Ativan राम्रो छ?
Valium र Ativan समान रूपमा प्रभावशाली देखाइएको छ। यद्यपि, तिनीहरूको प्रभावकारिता व्यक्ति र समस्याको उपचारमा निर्भर गर्दछ। अटिभनसँग वैलियमको तुलनामा कम ड्रग अन्तरक्रियाहरू छन्।
के म गर्भवती हुँदा भोलियम वा अटिभन प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन, Valium वा Ativan गर्भवती हुँदा प्रयोग गर्नु हुँदैन। बेन्जोडियापाइन्सले जन्म दोष र विकास समस्याहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
के म वालियम वा एटिभन रक्सीको साथ प्रयोग गर्न सक्छु?
बेन्जोडाइजेपाइनमा हुँदा रक्सी पिउनको लागि सिफारिश गरिदैन। त्यसो गर्नाले निन्द्रा र चक्कर आउने जस्तो सीएनएस निराशाजनक प्रभावहरूको जोखिम बढाउन सक्छ।
के बलियो छ, Valium वा Ativan?
दुबै औषधीहरू अपेक्षाकृत द्रुत रूपमा काम गर्न सुरू गर्दछ। जे होस्, भेलियम अटिभान भन्दा लामो शरीरमा बस्दछ। किनभने एटिभन छिटो खाली गरियो, यसमा फिर्ताको ठूलो जोखिम हुन सक्छ।
अतिभान र भोलियमको मिश्रण गर्न कत्ति खतरनाक छ?
बेन्जोडियाजेपाइनहरू मिश्रित हुनुहुन्न। अटिभन र भोलियम सँगै लिंदा ओभरडोज हुन सक्छ। यसले गम्भीर श्वासप्रश्वास उदासीनता, कोमा, र / वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ।
कुन चिन्ता, Valium 5mg वा Ativan 1mg को लागी बलियो छ?
वैलियम र अटिभन चिन्ताको गम्भिरताको आधारमा फरक ढंगले डोज गरिन्छ। भोलियम प्रति दिन चार पटक लिन सकिन्छ तर अटिभन दिनको दुई वा तीन पटक लिन सकिन्छ। कुन बेन्जोडियाजेपाइनले तपाईंको चिन्ताको लागि राम्रो काम गर्ने भनेर निर्णय गर्न डाक्टरसँग कुरा गर्नु उत्तम हुन्छ।
डिप्रेसन स्क्रिनिंगबाट के आशा गर्ने
नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम के हो? कारणहरू, लक्षणहरू र उपचारहरू
के यो Lisinopril मा काम गर्न सुरक्षित छ?
Zyrtec vs. Zyrtec-D: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
बच्चाहरूमा कान संक्रमण
न्युरोन्टिन साइड इफेक्टहरू र तिनीहरूलाई कसरी हटाउने
इलिक्विस बनाम वारफेरिन: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
साइम्बल्टा बनाम लेक्साप्रो: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
कसरी टिक टोकाहरू रोक्न सकिन्छ — र, यदि आवश्यक छ भने, तिनीहरूलाई व्यवहार गर्नुहोस्
Aspirin vs Ibuprofen: मुख्य भिन्नता र समानताहरू
रिस्टोरिल बनाम एम्बियन: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि उत्तम हो
कहिलेसम्म फ्लू संक्रामक हुन सक्छ
पुरुषहरूको लागि सबै भन्दा राम्रो मल्टीभिटिमहरू के हुन्
कति व्यक्ति प्रत्येक वर्ष डिप्रेसनको साथ निदान गरिन्छ
जेनेरिक औषधिहरू ब्राण्ड नामको रूपमा प्रभावकारी छन्
ईपो र hmo बीच के फरक छ
फ्लु संक्रामकको साथ कोही लामो समय हो
कसरी खमीर संक्रमण खुजलीबाट राहत पाउने